Onu ogugu nke ndi obia na Sivas ga - ejedebe 3 na ntinye nke YHT | RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region58 SivasSite na mbata nke YHT, ọnụ ọgụgụ ndị njem na Sivas ga-abawanye na 3
16 / 11 / 2019 58 Sivas, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Isi akụkọ, Turkey
Site na mbata nke yht, ọnụ ọgụgụ ndị njem na Sivas ga-ata ahụhụ
Site na mbata nke YHT, ọnụ ọgụgụ ndị njem na Sivas ga-abawanye na 3; Nleta na nyocha site n’ụbọchị tupu Onye isi ala nke Nnukwu Mgbakọ nke Sivas. Dr. Mustafa Şentop kwuru onyinye nke Sivas High Speed ​​Train nke ga-arụ ọrụ n’oge na-adịghị anya. Şentop, YHT'nin ọbịbịa nke ọnụ ọgụgụ ndị njem na Sivas ga-agbadata 3'e kwuru.
Isi nke Grand National Assembly nke Turkey Dr. Mustafa Sentop, Sivas ime nleta dị iche iche na Mahadum Republican 2019-2020 Mmụta Ọmụmụ Mmeghe na-emepe emepe maka ụbọchị mbụ gara aga kwuru nkwupụta dị mkpa na Sivas. Şentop, onye mere nleta mbụ nke mmemme Gọvanọ na mmemme Sivas, gara Mgbakọ nke Sivas mgbe nleta Gọvanọ Hilmi Bilgin'den natara ozi banyere ọrụ ahụ. N'ikwu okwu na mmemme mmeghe nke Sivas Cumhuriyet University 2019-2020 Mmụta Afọ, Şentop, Ọkà Okwu nke Nnukwu Nnukwu Onye Ọchịchị Turkey. Dr. Mustafa Sentop, YHT, Sivas ga-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị njem na-eme ihe ugboro 3, ọ gbakwụnyere. Şentop, '' ịga ebe ị ga-anọ ma dị mfe iji mesie ya ike na Onye isi ala Sentop, '' East Express, nke dọtara mmasị dị ukwuu n'afọ ndị na-adịbeghị anya, nwere olileanya na obodo anyị ga-esi n'okporo ụzọ awara awara na-abịa n'afọ na-abịa. Nke ahụ ga-abụ oge n'etiti elekere Ankara na Sivas 2. Istanbul, Konya ga -adị mfe ịbịa. Ya mere, echere m na 600 nke Sivas kwadoro n'afọ gara aga ga-akwado ndị njem nleta ma ọ dịkarịa ala ugboro atọ
Muslim Turkish mba 11. narị afọ, ọ bụ ezie na madrasas mbụ guzobere 17. Şentop kwuru na mgbe mmepe nke narị afọ nke 20 gasịrị kwụsịrị ịdị elu ya, "Anyị bụ ndị otu mba nke guzobere Nizamiye Madrasas na narị afọ 11. Afọ mmeghe nke madrasah mbụ bụ 1067. Ndi madrasas mepere n’obodo anyi dika Erzurum, Sivas, Kayseri, Konya n’oge Anatolian Seljuk State were Nizamiye Madrasas dika ihe nlere. Dika odi, abuo n’ime ha bu Buruciye Madrasah na Gök Madrasah nke bu oru nke 13. N’aka ozo, ebe ndi n’achoghi ire anyi ka ndi mmadu n’eme ka oge ndu ha di anya, anyi mepere madras ebe ana akuzi ihe gbasara akuko, asusu, onwa di iche iche. O di nwute, mmepe nke mmepe anya abughi vetikal. Ìhè nke oge ọla edo anyị, nke malitere na narị afọ 10, malitere ịgbachapụ mgbe narị afọ ole na ole gasịrị. Ọdịdị mmepeanya anyị, nke a na-agbaso ma na-e foromi ruo ọtụtụ narị afọ, malitere ịda mbà n'ihi mwakpo Mongol, mgbanwe nke ụzọ azụmahịa, nkwarụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, esemokwu ịrọ òtù na nke okpukpe. Kemgbe narị afọ nke 17, mmepeanya anyị enweghịzi aka dị elu. Anyị malitere i imitateomi ndị sooro anyị. ”
Abụ m onye mpako nke Sivas
Dị ka data si Statistics Institute of Turkey na mba anyị na-karịa 30 puku ọba akwụkwọ na-ekwupụta oche nke Grand National Assembly nke Turkey Dr. Mustafa Sentop, “Ọbá akwụkwọ mba 1, akwụkwọ agụmakwụkwọ mahadum 598, puku akwụkwọ ọgụgụ 162 halki ọha. Ndị ọzọ bụ ọba akwụkwọ. Sivas bụ obodo ukwu nke akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị kwesịrị ịkọwa site na akwụkwọ zuru ezu iji mejupụta otu n'ime ọba akwụkwọ ndị a. N'ihi na Sivas bụ ezigbo onye akaebe nke afọ 1000 anyị na Anatolia, ewezuga oge ochie. Seljuk, Ottoman na Nye direction na Republic of Turkey oge. Ọ bụrụ n’anyị nwere steeti nnwere onwe na nke taa, ndị Yigidos nwere ikike dị ukwuu. Anyị kwesịrị ịnapụta ikike a. N'ihi na ụwa atọ ahụ, nna nna asaa ndị chịkwara oke osimiri asaa tupu mmeri nke mmadụ ole na ole na-enweghị ntụkwasị obi na atụ na ịkwado onwe ha na-atụfu nnwere onwe zuru oke nke ndị dike ahụ gara n'ihu na mgbaru ọsọ nke nnwere onwe. 108 nabatara ndị ọrụ nke mgba nke mba anyị ma meghee ụzọ maka nnwere onwe anyị. N'afọ ndị ejiri ọkụ nwalee mba anyị, Gazi Mustafa Kemal ruru mpako ofufe nke Atatürk na ndị enyi ya. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụghị naanị na mpaghara ala ya, kamakwa yana ụkpụrụ akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị anyị egosila na obodo anyị bụ mkpuchi. Ya mere, enwere m afọ ojuju na Sivas, ana m ekele ụmụnne Sivas, "ka o kwuru.
Sivas, Obodo A Pụrụ Iche
Sivas bụ obodo nwere njiri mara nke na-adọta uche mmadụ niile na-egosi na nzuko omeiwu ahụ zigara Şentop, “Onye ọ bụla nwere ike ịhụ ebe ọ bụla anya. Sivas, ọkachasị ndị na-arụ ọrụ agha ebe a bụ obodo ha anaghị echezọ ntu oyi. Ọbụna n’oge oyi, ‘Si m na Erzurum, ma ebiri m na Sivas’ bụ obodo o kwuru. Agbanyeghị na ọ dị oyi, Sivas nwere njikota nke akụkụ akụkụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ Anatolia. Ọtụtụ narị ndị na-ede uri, ndị edemede na ndị na-ese ihe dịka Pir Sultan Abdal, Asik Veysel, Kul Himmet, Sefil Selimî, Muzaffer Sarısözen toro n'ala ndị a n'ihi na ọ dabere na ọdịnala mgbe ochie. Ruo narị afọ 16, ọ bụ otu n'ime ogige kachasị mkpa nke Roadzọ Silk mere eme. Taa ọ nwere otu uru. 28 bụ mpaghara nke abụọ kachasị na Turkey mgbe a gbasasịrị Konya na ogo mpaghara ala ya nke puku 500 km². Ndị akaebe kachasị mkpa banyere ebe anyị dị na akụkọ ihe mere eme bụ Gök Madrasah, Buruciye Madrasah, Ulu Alakụba na Behram Paşa Han. Nnukwu ụlọ alakụba na alinglọ Ọgwụ na Divrigi, nke agụnyere na UNESCO World Heritage List na 1985, bụ akwụkwọ dị mkpa nke na-egosi ọkwa mmepeanya anyị. Site na 700 ruo Anatolia, mba Turkey, onye wuru ụlọ na Anatolia, na-eche banyere ọkwa mmepeanya wuru na Sivas, ana m akwadosi gị ike ịga. ”
Nyocha akụkọ akụkọ Gökmedrese
Na mmekorita nke kọntaktị nke mpaghara Sivas, Gök Medrese, onye rụzuru ọrụ mweghachi ya, gakwara Gọvanọ Salih Ayhan ma kelee ndị kwadoro nkwado mweghachi nke ihe ncheta akụkọ ihe mere eme nke ga-abụ Museumlọ Ọrụ Nnyocha nke Ntọala. (Anyị Sivas)
A ga-akwụ ụgwọ mbata ụgbọ elu Istanbul! Ebe a ...
Ọhụrụ General Manager nke TCDD mere nleta mbụ ya na Sivas…
YHT ejiriwo 32 nde ndị njem ruo ugbu a
Uwe ndị nnabata na YHT gbanwere
Ebumnuche Zoro Eche na Ịmepụta HRCs
Onye Ọchịchị European Amputee National Team na YHT
YHT ga-eru İzmir na Sivas na 2019
Ulo oru nke nwanyi Mechinists na HRCs
Esi mee ka BillNNP Bill Bill Account na Ankara-Sivas YHT
Mgbakwunye ọzọ site na YHT maka Şeb-i Arus Ceremonies
13 agbachiri na Switzerland maka otu puku ndị njem na-eme njem nlegharị anya
A na-atụ anya ka ndị na-eme njem nleta 4,5 na-ele ndị Camberg Tower kwa afọ
Ụgbọ okporo ígwè na-ebugharị ọkụ ga-ebu ndị njem nleta
Na-ebu njem na Republic Street Tram
Ụlọ ọrụ njem njem ndị njem bụ 'Wonderland Eurasia' na-emeghe
Ngwunye okporo ụzọ nke Ankara-Sivas High Speed